Ninja Spinki Zvinetso, mutsva mutambo kubva kumusiki weFlappy Shiri | IPhone nhau
Ninja Spinki Dambudziko, mutsva mutambo usingaite kubva kumusiki weFlappy Shiri
Wakatadza here mutambo weaya asingagone Flappy Shiri mhando? Nhau dzakanaka dzakanaka: Magiya, iyo studio yakagadzira mutambo weiyo goofy, pixelated shiri yaburitsa Ninja Spinki Zvinetso, zita rinonyanya kungwarira maererano nemufananidzo uye odhiyo, asi izvo zvinochengetedza mwero wekutambudzika wakafanana neiyo yakatangisa musiki wayo mukurumbira.
PaNinja Spinki Matambudziko isu isu tinofanirwa kudzora ninja nepo, mukufunga, iye anodzidzira kuve murwi ari nani. Uye zvakare, kana tisati tataura kuti iri zita nyowani kubva kumusiki weFlappy Shiri rakanga rakatarisa zvakanyanya pane izvo ruzivo, rakatarisawo pakupa zvakasiyana: pachave huwandu hwenhanho mazana maviri nemakumi mapfumbamwe Pakati pedu tichafanirwa, semuenzaniso, kunzvenga katsi, kukanda nyeredzi kwakanangwa, kunzvenga zvinoita semabhomba kana kunzvenga kuti mimwe michero inotibata nekutisvetukira.
Ninja Spinki Dambudziko richaisa zvekare tsinga dzako pamuedzo
Tichakwanisa kupfuudza yega yega nhanho kana masekondi gumi apfuura kana imwe neimwe yatanga, iyo pakutanga ingaite senge iri nyore (haisi). Asi kana izvo zvatinoda chiri chinetso chikuru, nguva dzese patinopfuura danho, rinowanikwa mu Endless modhi, zvinoreva kuti kunetsekana kuchawedzera nekuwedzera kusingamire kusvikira ninja yarova nekurasikirwa. Kana isu tichitamba mu "Isingaperi" isu tichafanirwa zvakare kuunganidza nyeredzi, idzo pakutanga dzinoratidzika senge yekurova system mune ino mutambo modhi.
Kana iwe ukandibvunza zvandinofunga nezveNinja Spinki Dambudziko uye ini ndaifanira kutendeseka, ini ndaizoti ndinofunga zvinonyanya kunakidza kupfuura mamwe maGiya zvigadzirwa. Iyo "pique" ichiripo, asi inoita senge inosvikika uye inonakidza kupfuura mazita akaita seSwing Copters uko kunakidzwa kuri mukusunga tsinga dzako, kuwana mamaki epamusoro uye kuudza icho. Muchokwadi, ndanga ndichinyemwerera iyo nguva yese ndichiyedza iyo kunyora chinyorwa ichi, saka ndinofunga chakakosha. Wakambozviedza here? Ko izvi?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Ninja Spinki Dambudziko, mutsva mutambo usingaite kubva kumusiki weFlappy Shiri
Twitter inovandudzwa nekuwedzera chikamu chitsva: Ongorora
Apple Inobatana Kubatana paAI Kubatana paArtificial Intelligence